एकता नेपाललार्ई ५० हजार सहयोग, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका क्षेत्रमा खर्च गरिने
कैलाली (पहिचान) असार ११ – टेवा काठमाडौंले सन् २०१७/१८ को दोस्रो किस्ता अनुदान वापत एकता नेपाललाई ५० हजार रुपैया सहयोग प्रदान गरेको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको लागि वकालत र अन्तरक्रिया कार्यक्रम परियोजनाको लागि सहयोग गरेको हो ।
एकता नेपाल २०६६ सालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मानव अधिकार र यौन स्वास्थ्य सम्बद्र्वनको लागि धनगढीमा स्थापित संस्था हो । एकता नेपाल तेस्रोलिंगी पुरुष र महिला समलिंगीको सहभागीतामा संचालित संस्था हो । यस संस्थाले समग्र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक एलजीबीटीआई समुदायको मानवअधिकारको क्षेत्रमा समेत कार्य गरिरहेको छ ।
टेवाकी कार्यक्रम प्रवन्धक अनुजा श्रेष्ठले एकता नेपाललाई समलिंगी तेस्रोलिंगीको नेतृत्व विकास र सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रियाको लागि यो अनुदान रकम प्रदान गरेकी हुन् ।
समाजमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई अझै पनि सकारात्मक दृष्किोणले नहेर्ने र परिवारले आफ्नै सन्तानलाई पनि बुझ्न नसकेको विवेक सिंहले बताए । यो समुदायले आफु के हो ? हाम्रो अधिकार के कस्ता छन् ? भन्ने विषयमा जानकारी नहुँदा आफ्नो पहिचान खुलाउन समस्या परेको उनको भनाई छ ।
घरपरिवारले नगरिकता नबनाई दिएको अवस्था रहेको भन्दै उनले प्राप्त सहयोग यस्ता प्रकारको चेतना वृद्वी गर्न खर्च गरिने जानकारी दिए ।